35 Jehova wee gaa n’ihu ịgwa Mozis okwu na mbara ọzara Moab nke dị n’akụkụ Jọdan,+ n’ebe dị nso na Jeriko, sị: 2 “Nye ụmụ Izrel iwu ka ha si n’ihe nketa ha nwetara nye ndị Livaị obodo+ ha ga-ebi, ha ga-enyekwa ndị Livaị ala ịta ahịhịa nke gbara obodo ndị ahụ gburugburu.+ 3 Obodo ndị ahụ ga-abụ ebe ha ga-ebi, ma ala ịta ahịhịa ha ga-abụ maka anụ ụlọ ha na akụ̀ ha nakwa maka anụ ọhịa ha niile. 4 Ala ịta ahịhịa nke obodo ndị ahụ, bụ́ nke unu ga-enye ndị Livaị, ga-adị otu puku kubit malite ná mgbidi obodo gbaa gburugburu. 5 Tụpụtanụ ala dị puku kubit abụọ n’akụkụ ebe ọwụwa anyanwụ ná mpụga obodo, puku kubit abụọ n’ebe ndịda, puku kubit abụọ n’akụkụ ebe ọdịda anyanwụ, nakwa puku kubit abụọ n’ebe ugwu, obodo ga-adịkwa n’etiti. Ọ ga-abụ ala ịta ahịhịa nke obodo ha dị iche iche. 6 “Obodo ndị a ka unu ga-enye ndị Livaị: obodo mgbaba isii,+ bụ́ ndị unu ga-enye ha ka onye gburu mmadụ gbaba na ha,+ unu ga-enyekwa ha obodo iri anọ na abụọ ndị ọzọ ma e wezụga ndị ahụ. 7 Obodo niile unu ga-enye ndị Livaị ga-adị iri anọ na asatọ, tinyere ala ịta ahịhịa ha.+ 8 Unu ga-esi n’ala ụmụ Izrel nye ha obodo ndị ahụ.+ Unu ga-anara ndị dị ọtụtụ ọtụtụ obodo, narakwa ndị dị ole na ole obodo ole na ole.+ Ebo nke ọ bụla ga-enye ndị Livaị ụfọdụ n’ime obodo ya dabere n’otú ala ọ ga-eketa hà.” 9 Jehova wee gaa n’ihu ịgwa Mozis, sị: 10 “Gwa ụmụ Izrel okwu, sị ha, ‘Unu ga-agafe Jọdan ịbanye n’ala Kenan.+ 11 Họrọnụ obodo ndị dị unu mma. Ha ga-abụrụ unu obodo mgbaba, onye gburu mmadụ, bụ́ onye gburu mkpụrụ obi n’amaghị ama, ga-agbaba na ha.+ 12 Obodo ndị ahụ ga-abụrụ unu ebe mgbaba iji gbanahụ onye ọbọ ọbara,+ ka onye gburu mmadụ ghara ịnwụ ruo mgbe o guzoro n’ihu nzukọ unu ka e kpee ya ikpe.+ 13 Obodo ndị ahụ unu ga-enye ha, bụ́ obodo mgbaba isii ahụ, ga-adịrị unu. 14 Unu ga-enye ha obodo atọ n’akụkụ a nke Jọdan,+ unu ga-enyekwa ha obodo atọ n’ala Kenan.+ Obodo mgbaba ka ha ga-abụ. 15 Obodo isii ndị a ga-abụrụ ụmụ Izrel na onye mbịarambịa+ na onye ọbịa nọ n’etiti ha ebe mgbaba, ka onye ọ bụla nke gburu mkpụrụ obi n’amaghị ama gbaba na ha.+ 16 “‘Ọ bụrụ na ọ bụ mkpirikpi ígwè ka o ji kụgbuo ya, o gburu ọchụ.+ A ghaghị igbu onye ahụ gburu ọchụ.+ 17 Ma ọ bụrụ na ọ bụ obere nkume nke nwere ike igbu ya ka o ji tụgbuo ya, o gburu ọchụ. A ghaghị igbu onye ahụ gburu ọchụ. 18 Ọ bụrụ na ọ bụ mkpirikpi osisi nke nwere ike igbu ya ka o ji kụgbuo ya, o gburu ọchụ. A ghaghị igbu onye ahụ gburu ọchụ. 19 “‘Ọ bụ onye ọbọ+ ọbara ga-egbu onye ahụ gburu ọchụ. Ya onwe ya ga-egbu ya mgbe ọ bụla o nwetara ya. 20 Ọ bụrụ na ọ kwara ya aka+ n’ihi ịkpọasị ma ọ bụ chechie ya n’ụzọ+ wee tụgbuo ya, 21 ma ọ bụ, ọ bụrụ na o ji aka kụgbuo ya n’ihi na o buuru ya iro n’obi, a ghaghị igbu onye ahụ kụgburu ya. O gburu ọchụ. Onye ọbọ ọbara ga-egbu onye ahụ gburu ọchụ mgbe ọ bụla o nwetara ya.+ 22 “‘Ma ọ bụrụ na ọ kwara ya aka n’amaghị ama, n’ebughịrị ya iro n’obi, ma ọ bụ tụọ ya ihe n’echechighị ya echechi n’ụzọ,+ 23 ma ọ bụ tụọ ya nkume nke pụrụ igbu ya, mgbe ọ na-ahụghị ya, ma ọ bụ mee ka ọ dagbuo ya, mgbe ya na ya na-anọghị n’iro, ọ chọghịkwa imerụ ya ahụ́, 24 nzukọ unu ga-ekpe ikpe n’etiti onye ahụ gburu mmadụ na onye ọbọ ọbara dị ka mkpebi ndị a si dị.+ 25 Nzukọ+ unu ga-anapụta onye ahụ gburu mmadụ n’aka onye ọbọ ọbara ahụ, nzukọ unu ga-akpọghachi ya n’obodo mgbaba ahụ ọ gbagara, ọ ga-ebikwa ebe ahụ ruo mgbe nnukwu onye nchụàjà e tere mmanụ dị nsọ nwụrụ.+ 26 “‘Ma ọ bụrụ na onye ahụ gburu mmadụ anwaa anwaa gafee ókèala nke obodo mgbaba ahụ ọ gbagara, 27 onye ọbọ+ ọbara ewee hụ ya ná mpụga ókèala nke obodo ahụ ọ gbagara, onye ọbọ ọbara ahụ ewee gbuo onye ahụ gburu mmadụ, ikpe ọbara amaghị ya. 28 N’ihi na o kwesịrị ibi n’obodo ahụ ọ gbagara ruo mgbe nnukwu onye nchụàjà nwụrụ,+ mgbe nnukwu onye nchụàjà nwụsịrị, onye ahụ gburu mmadụ nwere ike ịlaghachi n’ala ya. 29 Ihe ndị a ga-abụrụ unu ụkpụrụ e ji ekpe ikpe n’ọgbọ unu niile n’ebe obibi unu niile. 30 “‘Onye ọ bụla nke gburu mkpụrụ obi, a ga-egbu ya dị ka onye gburu ọchụ+ n’ọnụ ndị akaebe,+ otu onye akaebe agaghị enwe ike ịgbagide mkpụrụ obi akaebe ka e wee gbuo ya. 31 Unu anarala ihe mgbapụta ọ bụla maka mkpụrụ obi gburu ọchụ bụ́ onye kwesịrị ọnwụ,+ n’ihi na a ghaghị igbu ya.+ 32 Unu anarala ihe mgbapụta maka onye gbagara n’obodo mgbaba, ka o wee laghachi biri n’ala ya tupu nnukwu onye nchụàjà anwụọ. 33 “‘Unu emerụla ala unu bi; n’ihi na ọ bụ ọbara na-emerụ ala,+ ọ dịghịkwa ihe e ji ekpuchiri ala mmehie maka ọbara a wụfuru na ya, ma e wezụga ọbara nke onye wụfuru ọbara.+ 34 Unu emerụla ala unu bi, nke ọ bụ n’etiti ya ka m bi; n’ihi na mụ onwe m, Jehova, bi n’etiti ụmụ Izrel.’”+